Nhau - Nei nzvimbo zhinji dzichishandiswa kudhirowa album kudhinda nekutengesa?
Guta rega rega riri kuchinja zvishoma nezvishoma, uye shanduko muguta rinozouyawo kubva kwakasiyana capital capital, uye zvakare kubva kumabhizimusi akasiyana ekuvandudza hupfumi, uye kune akawanda makambani makuru anoda kuve nekwanisi kuita ravo bhizinesi Kunyangwe zvirinani, kugona kukwezva vatengi vazhinji, hongu, ivo vachasarudzawo imwe nzira yekushambadzira zvigadzirwa zvavo, izvo zvakare zvichave nehurongwa hwekushambadzira.
Chigadzirwa catalog kudhinda kunowanzo kutengeswa kunzvimbo zhinji, semuenzaniso, nzvimbo zhinji dzinotengeswa mumaguta makuru, uye ikozvino nzvimbo zhinji dzekumaruwa dzinowanda zvishoma nezvishoma, uye nzvimbo zhinji dzekumaruwa dzichavawo neimwe simba rekushandisa.
Naizvozvo, iko kudhinda katurogu yechigadzirwa inotengeswa kunzvimbo zhinji, uye inozowedzerwa zvishoma nezvishoma, uye inogona kushandiswa munzvimbo zhinji dzenyika. Naizvozvo, hazvina kuoma kuwana kuti musika wakadaro uchiri wakakura, nekuti kudiwa kwemusika kwacho kwakakura. Yakakura, saka kune akawanda makuru maNanjing anodhinda michero, ivo vanokwanisa chete kusangana nezvimwe zvinodiwa pamusika kana vakaramba vachiwedzera zvigadzirwa zvavo.
Bhizinesi rega rega rine rakasiyana bhizinesi nzira uye uzivi. Kana ivo vachida kuti zvigadzirwa zvavo zvishande zvirinani, hongu, ivo vanosarudza nzira dzakasiyana dzekuzivisa vanhu vazhinji nezve kwavo kurarama. Zvekuti vanhu vazhinji vanokwanisa kuwana yakawanda yekushandisa muhupenyu hwavo.